Naajeriyaa Keessatti Namoonni Torba Ajeefaman
Jiraattonni akka jedhanitti Kaaba-baha Naayijeeriyaa gandaa Boornoo keessatti finxaaleyoonii Isilaamummaa lallaban haleellaa raawwataniin yoo yarate namoonni Torbaa du’uun isaanii beekameera.
Haleellaan kun kan raawwatamee yemuu bareessaan muummee dhaabbataa mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guterees Namoottan hokkoraa jihaadistootaa irraa dandamataaniin wal arguudhaaf naannoo Boornoo keessaa turanitti. Imala naajeriyaatti taasisan irratti kan dubbatan Antooniyoo guterees,
Wantii gariin nu nageenyaaf gochuu daddeenyu warren abdii dhabanii shororkeesitootaa ta’an garuu amma lammiiwaan ta’amii jereenyaa obboleewaan isaaniitiif gumaacha gochuu danda’an deebifnee walitti fiduudha jedhaniiru.
Waggoottan Kurnan darbaan keessatti Naajeriyaan hidhattootaa garee Bokkaa haram fi garee Islaamiik Isteets isa lixa Afrikaa keessaa sosocho’uu wajjin lola keessaa jirti. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Jedhutti, hookkora finxaaleyitootaa Kanaan kan ka’ee namoonni kuma 35 ol du’anii miiliyoonatti kan lakkawan immoo jerenyaa isaanii irraa buqa’aniiru.